Labo Beeroleey Tigrey Ah oo Lagu Dilay Dhagax Gobolka Oromiya |
Labo Beeroleey Tigrey Ah oo Lagu Dilay Dhagax Gobolka Oromiya
Xog aan helnay ayaa tibaaxaysa in labo qof oo beeroleey Tigrey ah mudo dheerna ku noolaa oo ka shaqaysanayay Gobolka Oromada dhagax lagu dilay.
Warkan ayaa sheegaya in koox dhalinyaro Oromo ah oo gadoodsan ay weerar ku qaadeen labo qof oo beeroleey ah kuwaas oo asal ahaan u dhashay Qawmiyada Tigrey mudo dheerna ku dhex noolaa Oromada in dhagax qudha lagaga qaaday.
Warkan ayaa intaas ku daraya in laamaha amnigu ay gacanta ku dhigeen qaar kamid ah dadkii falkan arxan darrada ah gaystay, sidoo kale waxaa wali lagu raad joogaa qaar kamid ah dambiileyaashii falkan gaystay oo baxsaday. Waa dhacdo aad u xanuun badan in qof banii’aadam ah oon waxba galabsanin intii gurigiisa loogu yimaado hadana dhagax lagu dilo.
Dhinaca kale maleeshiyaad iyo dableey hubaysan oo Oromo ah ayaa xasuuqay shacab aad u tiro badan oo Soomaali ah kuwaas oo ku sugnaa xeryo qaxooti ay ku ahaayeen oo ku yaala duleedka magaalada Nazret ee dhulka Oromiya.
Soomaalida la xasuuqay oo ahaa dadkii horey loogu qasbay inay deegaankoodii ka qaxaan ayaa hadana lagaga daba tagay xeryihii ay qaxootiga ku ahaayeen.